पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सः २ वटा रेसबाहिर, कसले पाउला लाइसेन्स ? – Clickmandu
दिलु कार्की २०७८ वैशाख १७ गते ११:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म चर्चामा रहेको विषय हो, ‘नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स’ ।
नेपालमा एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेको छ । हाल १९ जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
यी कम्पनीको व्यवसायको जाखिमको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले मात्रै बहन गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी बजारमा ल्याउने तयारी गरेको थिए ।
बजारको आवश्यकताको अध्ययन गरी बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको छ ।
समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रस्ताव पेश गर्न जेठ ५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।
सो अघि नै नयाँ पुनर्बीमा ल्याउने तयारी बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, कर्मचारी, बीमा क्षेत्रसँग सम्मत विभिन्न व्यक्तिलगायत थिए । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र बीमा समितिमा ४ वटा कम्पनी दर्ता समेत भइसकेको छ ।
जसमा जेन्युन रि-इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि-इस्योरेन्स, प्रुडेन्सियल रि-इन्स्योन्स र काठमाण्डू रि-इन्स्योरेन्स हुन् ।
तर समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना सार्वजनिक गरेसँगै यी दर्ता भइसकेको कम्पनी खारेज भइ नयाँ आवेदन दिनुपर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा प्राप्त प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्तावकलाई कम्पनी सञ्चालनको लाइसेन्स दिइने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।
‘यसअघि नै दर्ता भए भन्दैमा तीनैलाई टिको लगाएर लाइसेन्स दिने कुरा हुँदैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सूचनामा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आएका प्रस्तावमध्ये उत्कृष्टले लाइसेन्स पाउँछ ।’
पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एक पुनर्बीमाको कम्पनी आवश्यकता परेको हुँदा सो कार्य अगाडि बढाउन समितिले प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनले बताए ।
मापदण्डका कारण २ वटा दौडबाट बाहिर, लाइसेन्स पाउने सम्भावना कसको ?
समितिले बीमा क्षेत्रमा एक वटामात्र पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउने उल्लेख गरेसँगै दर्ता भएर सञ्चालनमा आउने तयारी समेत गरेका कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ ।
हालसम्म अनौपचारीक रुपमा लाइसेन्स पाउन दौडमा रहेको जेन्युन रि-इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि-इस्योरेन्स, प्रुडेन्सियल रि-इन्स्योन्स र काठमाण्डू रि-इन्स्योरेन्स अब औपचारीक रुपमै एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भएका छन् ।
समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्दा १० अर्ब रुपैयाँको पुँजी तोक्नुका साथै नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा लगानी गर्ने सेयरधनी नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सो व्यवस्थाका कारण दर्ता भइसकेका कम्पनीहरुले समेत समितिमा लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने देखिन्छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४३.५५ प्रतिशत, १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको २७.५० प्रतिशत, ८ वटा जीवन बीमा कम्पनीको ८.०२ प्रतिशत, ७ वटा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ-संस्था तथा समूहको ७.१८ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
नयाँ आउने तयारीमा रहेका रि-इन्स्योरेन्समा कसको लगानी ?
यसअघि नै दर्ता भइसकेका कम्पनीहरुमा जेन्युन रि-इन्स्योरेन्स बीमा समितका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की, बीमा विज्ञ डा. रबीन्द्र घिमिरे, बीमा क्षेत्रमै ५८ वर्ष काम गरेका कृष्णबहादुर बस्नेत, अर्थविद् केशव आचार्य, कृषि विकास बैंकका पूर्वप्रशाशक मुकुन्द पराजुली, अभियान लघुवित्त र समुन्नती इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष बाबुराम थापा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीलगायतको लगानी रहने बताइएको छ ।
अन्नपूर्ण रि-इस्योरेन्समा माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक डा. बीरेन्द्र महत्तो, नेको इन्स्योरेन्सका सीइओ अशोक खड्का र शंखर गु्रप अन्तगैत जगदम्बा ग्रुपको तर्फबाट साहिल अग्रवालको लगानी रहने जानकारी आएको छ ।
पु्रडेन्सियल रि-इन्स्योरेन्स आइएमई ग्रुप र विशाल गु्रपको सहलगानीमा ल्याउन लागिएको कम्पनी हो । यसमा आइएमई गु्रपका चन्द्र ढकाल र विशाल गु्रपका अशोक अग्रवालले सयुक्त लगानी गरी ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
काठमाण्डू रि-इन्स्योरेन्स महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ रमेशकुमार भट्टराई, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका पूर्व सीइओ देवेन्द्रप्रताप शाह र नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापक पूर्वअध्यक्ष महेश गुरागाँईलगायतको लगानी रहेको जानकारी आएको छ ।
यसअघिनै नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा सेयर लगानी गरिसकेको विशाल गु्रप र आइएमई ग्रुपबाट प्रबर्द्धत प्रुडेन्सियल रि-इन्स्योन्सलाई समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डले लाइसेन्सको दौडबाट बाहिर निस्किएको छ भने अनपूर्ण रि-इस्योरेन्समा लगानी गर्ने लगानीकर्ता समेत यस अघिनै विभिन्न संघ-संस्थामार्फत् नेपाल रि- इन्स्योरेन्समा लगानी गरिसकेका जानकारहरुको बताउँछन् ।
लाइसेन्स पाउने सम्भावना भएका कम्पनीको योजना प्रस्ताव कस्तो ?
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीम क्रस होल्डिङ्ग भएकै कारणले नयाँ पुनरबीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स नपाउने हुँदा अहिलेसम्म काठमाण्डू रि-इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि-इन्स्योरेन्सले मात्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्ने देखिन्छ ।
लाइसेन्सका लागि प्रस्तावकले पेश गरेका प्रस्तावमध्ये समितिबाट तयार हुने मूल्यांकनका आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने एक प्रस्तावकलाई मात्रै छनोट गरिने उल्लेख छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा कस्को कति छ सेयर ?
लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढी भएका २ रि-इन्स्योरेन्सको योजना प्रस्तावः
काठमाण्डू रि-इन्स्योरेन्सका तर्फबाट रमेशकुमार भट्टराई
बीमा समितिले एक वटामात्र रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषय स्वागतयोग्य नै छ । नेपालको बीमा बजारलाई हेरेर रि-इन्स्योरेन्स २ वटा भए पुग्छ । पहिले नै नेपाल रि सञ्चालनमा छ भने यसलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटामात्र रि-इन्स्योरेन्स आउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई दिनैपर्छ भने पनि ८० प्रतिशत व्यवसाय विदेशी रि–इन्स्योरेन्सलाई कम्पनीहरुले दिन्छन् । यदि २ वटा रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर गुणस्तरीय सेवा दिन्छन् ।
सबै बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत व्यवसाय स्वदेशकै रि-इन्स्योरेन्सलाई दिन्छन् र सोमार्फत् विदेशीने पैसा नेपालमै रहन्छ ।
कम्पनी ल्याउने चाहना सबैको हुनु स्वाभाविक हो तर व्यवस्थापन क्षमता र टीम राम्रो कोसँग छ त्यो सम्बन्धित निकायले हेरेर नै लाइसेन्स दिनुपर्छ । रहर गर्यो भन्दैमा यस्तो टेक्निकल बिषयको क्षेत्रमा कम्पनी खोल्नु दिनु हुँदैन ।
बीमा समितिले न्यूनतम पुँजी तोकिदिएको छ । त्यो काठमाण्डू रिले त्यो पूरा गरिसकको छ । यसबाहेक पनि स्थापना हुन चाहने कम्पनीले भविष्यका योजना कस्तो राखेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो कम्पनीले विदेशी साझोदारी भित्र्याउने योजना राखेको छ ।
व्यवसायमा पनि नेपालको मात्र व्यवसायलाई नहेरी ६० प्रतिशत नेपालको र ४० प्रतिशत विदेशी दक्षिण एशियाली मुलुक अफ्रिकन मुलुकको व्यवसाय भित्र्याएर विदेशी मुद्रा समेत नेपाल भित्र्याउने योजना छ ।
बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयले हेर्दा कम्पनी चलाउनका लागि टीम कोसँग राम्रो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
रि-इन्स्योरेन्स चलाइसकेको, बीमामा राम्रो ज्ञान तथा विज्ञता भएको, भोलिका दिनमा प्रशासन चलाउन सक्ने व्यक्तिलगायत बीमाका टेक्निकल विषयलाई राम्रोसँग बुझेको टीम भएको हेर्नुपर्छ । जुन काडमाण्डू रिसँग छ ।
सम्बन्धित निकायले यस्ता सबै विषयलाई निक्र्यौल गरेर काडमाण्डू रिलाई लाइसेन्स दिएमा साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने योजना छ । कम्पनीका बैंकहरुको धेरै लगानी छ । त्यसकारण लागनीकर्ताको प्रतिफललाई पनि ध्यानमा राखि काम गर्नुपर्छ ।
जेन्युन रि-इन्स्योरेन्सका तर्फबाट श्रीमान कार्की
अहिलेसम्म बीमा समितिले तोकिदिएको मापण्ड अनुसार नै कम्पनीको संरचना तयार भएको छ । नेपाल रि-इन्स्योरेन्ससँग क्रस होल्डिङको विषय आएको छ ।
हामीसँग पनि क्रस होल्डिङ्ग हुने केही लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु टीमबाट बाहिरिसक्नु भएको छ । बाहिरिने व्यक्ति तथा समूहको लगानी १ प्रतिशतभन्दा तल नै थियो त्यसकारण खासै असर पर्दैन ।
समितिले पुँजी तोक्नुभन्दा अघिनै हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी तयगरी काम गरेका थियौ ।
कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन हुनलाई पुँजीमात्र नभएर पूर्णदक्षताका व्यवस्थापन कमिटी तथा विज्ञहरुको टिम चाहिन्छ । बीमा भनेको टेक्निकल बिषय हो । सानो त्रुटिले गर्दापनि धेरै ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।
व्यवसाय पाउनुभन्दा पनि पाएको व्यवसायलाई जोगाउनु र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो । त्यसकारण यसमा पुनर्बीमा सम्बन्धी विज्ञ भएको टीम नै आवश्यक पर्छ ।
पुनर्बीमा भनेको स्वदेशसँगै विदेशको व्यवसायलाई समेट्ने क्षेत्र हो । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट व्यवसाय लिनका लागि त्यहाँको कम्पनीले पनि आवश्यक विज्ञता भएको टीम नै हेर्छ जुन जेन्युन रि-इन्स्योरेन्समा छन् । साथै, विदेशी कम्पनीले दिएको व्यवसाय व्यवस्थापन गर्नु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । जसका लागि बीमा सम्बन्धी टेक्निकल ज्ञान भएको टीम चाहिन्छ ।
यसका साथै, हामीले साना लगानीर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर कम्पनीको संरचना तयार गरेका छौं । जसमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ता हामीसँग हुनुहुन्छ । सरकारको नीति पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ । थोरै पैसा लागनी गर्ने ३/४ सय लगानीकर्ता धेरै हुँदा त्यो परिकल्पनालाई पूरा गर्न जेन्युन रि-इन्स्योरेन्सले सहयोग गर्छ ।
दर्ता भएको भएपनि अहिले हाम्रो दर्ता नै रद्द भइसकेको अवस्था छ । तर पनि कम्पनीको भविष्यको योजनाअनुसार समितिमा पुनः प्रस्तावको निवेदन दिने तयारी हाम्रो छ ।
हामीसँग टेक्निकल ग्रुप धेरै राम्रो छ भने आवश्यता परेमा व्यवस्थापन कमिटीमा विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउने योजना छ ।
धेरै वर्ष बीमा क्षेत्रका कम्पनी तथा नियामकीय भूमिका निर्वाह गरेका र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी र ब्रोकरसँग काम गरेका अनुभव भएको व्यक्तिहरु जेन्युन हुनुहुन्छ ।
कम्पनी दर्ता भइसकेको पनि हामीले विभिन्न विदेशी रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी र ब्रोकरसँग कुरा भइसकेको छ । जसले गर्दा पछि सहयोग हुन्छ र विदेशी लगानी ल्याएर कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने समेत योजना छ ।